Fedora 25 ISO mifananidzo inogadziridzwa | Linux Vakapindwa muropa
Chikwata cheFedora nguva pfupi yadarika chakazivisa gadziriso kune ISO mifananidzo Iyi yekuvandudza haisi itsva vhezheni, asi inonakidza kune vese vashandisi veichi kugovera sezvo ichiwedzera yazvino nhau uye ekuchengetedza zvigamba zvekuparadzira
Kunyanya shanduko idzi dzinokanganisa iyo ISO mifananidzo yeFedora 25 Spins nemaLabndiko kuti, shanduro dzakanangidzirwa kudesktop chaiyo kana kune rimwe basa. Shanduko idzi dzinowanikwawo mumifananidzo yeDVD, asi chete mushanduro makumi matanhatu nenomwe.
Kugadziridza Iyi mifananidzo yeFedora 25 ISO inoitirwa vashandisi vatsva kana avo vashandisi vanoda kudzorera sisitimu yekushandisa zvakare, kwete vashandisi vatove neFedora 25 yakaiswa. Kune avo vanotova neyako uye vanoshandisa Fedora 25, havana shanduko dzakakosha uye hazvina kukodzera kuisa Fedora kubva pamifananidzo iyi mitsva. Zvakare, mune angangoitika ese, vashandisi vanenge vatove neese matsva matsva nemaapplication.
Yakagadziridzwa Fedora 25 Spins uye Labs ISO mifananidzo inotakura zuva rekuburitsa
Kana iwe uchinyatsoda kuwana iyi yazvino vhezheni, iwe unofanirwa kuve nechokwadi icho mufananidzo weIO une chirevo F25-20170210, iyo inoreva kuzuva rekuburitswa kweichi ISO chifananidzo. Vazhinji vakarohwa nenyaya yekuti pakati peshanduko idzi pane kuuya kweshanduro nyowani, mune iyi Linux 4.9.8 kernel, imwe vhezheni yakadzvanywa kupfuura iyo iri muFedora 25 uye mazhinji eisina-rolling. kusunungura kugovera.
Pachezvangu, iyi yekuvandudza yeFedora 25 spins inonakidza uye pamwe chikonzero chekugadzirisa yedu system kana isu tisina kunyatso kuzviita kwemazuva, vhiki kana mwedzi. Zvino, kana uchidaro, wana nguva nekuti nzvimbo yainogara iyo mitsva yekuvandudza huwandu mune dzimwe nguva kusvika 700 MB, yakakwira kwazvo huwandu hweyakajairwa adsl kubatanidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora 25 ISO mifananidzo inogadziridzwa
Is 700 megabytes chiyero chikuru kwazvo cheIO?
Tarisa uone maDVD matatu e3 layer iyo Debian ine….
Dzidza kuverenga, 700MB kugadzirisa, kwete 700MB .iso
KDE Plasma ichaenderana neFlatpak